In Tartanka Premier League Loogu Golayn Doono Liverpool & Man City, Musiibadii Chelsea Ee Wembley & Afartii Qoddob Ee Ugu Muhiimsanaa Ee Laga Bartay Premier League Toddobaadkan. - Gool24.Net
In Tartanka Premier League Loogu Golayn Doono Liverpool & Man City, Musiibadii Chelsea Ee Wembley & Afartii Qoddob Ee Ugu Muhiimsanaa Ee Laga Bartay Premier League Toddobaadkan.
November 26, 2018 Apdihakem Omer Adem
Kooxaha Premier League ayaa intooda badani soo dheelay kulamadii toddobaadka 13-aad ee xilli ciyaareedkan 2018-19 waxaana kaliya hadhsan kulanka caawa dhex mari doona kooxaha Newcastle United iyo Burnley.
Kooxaha ugu sarreeya miiska kala sarreynta ee Manchester City iyo Liverpool ayaa guulo waaweyn soo gaadhay iyaga oo muujiyay sababta ay u yihiin kooxaha xilli ciyaareedkan loogu kala bixi doono fagaaraha tartanka Premier League.
Chelsea oo guud ahaan xilli ciyaareedkn kusoo naaloonaysay rekoodh guuldaro la’aan ah ayaa dhibaato kala soo kulantay jaarkeeda Tottenham.
Manchester United ayaa musiibo kale dhexda ka gashay kaddib bar-bardhacii Crystal Palace halka wiilasha Unai Emery ee Arsenal ayaa guul ka heleen Bournemouth isla marfkaana muujieen in wax badan laga filan karo.
Haddaba, Waxaan halkan idiinku soo gudbin doonaa afarta qoddob ee ugu waaweyn ee laga bartay Premier League toddobaadkan oo ahaa midkii 13-aad.
1: Tottenham oo soo gaba-gabaysay musalsalkii guuldaro la’aanta Chelsea
Tottenham ayaa xilli ciyaareedkii 2016-2017 noqotay kooxdii soo gaba-gabaysay guulihii xidhiidhka ahaa ee Chelsea oo uu hoggaaminayay Antonio Conte waxaana ay markale rekoodh ka qaseen Blues toddobaadkan iyaga oo 3-1 ugu awood sheegtay.
2: Pep Guardiola waxa uu dalbanayaa wax intaa ka badan.
Pep ayaa ka yaabsaday jamaahiirta kubadda cagta England kaddib markii uu bandhigii ay 4-0 ka uga soo adkaadeen West Ham United ku tilmaamay mid hoos u dhac ah isla markaana ay soo laaban doonaan iyaga oo sidan ka fiican.
Guardiola ayaa guushii afraad kusoo gaadhay garoonka West Ham ee London Stadium waxaana uu kulamadaas ku adkaaday goolal wadar ahaan noqonaya 17-1.
3: Weerarkii Mourinho ee quluubta xiddigaha kooxdiisa.
Manchester United ayaa bandhig kale oo lagu caajisay ku muujisay garoonkeeda Old Trafford, Tababare Mourinho oo horeba u eedeeyay da’yarta kooxdiisa ayaa markale si guud ahaaneed dhaleecayn ugu tuuray safka kooxda oo uu ku tilmaamay kuwo qalbi la’aan ah.
Jose ayaa kulanka kaddib Yidhi “Waxa kugu waajib ah inaad ku ciyaarto maskax, Laakiin dareenkaygu waa inaysan halkaa ka jirin qalbi ku filani”
4: Liverpool oo heer sarre maraysa
Kooxda Jurgen Klopp ayaa markale muujisay sababta ay u yihiin kooxda kaliya ee tartan dhab ah la geli karta Manchester City, Inay guul 0-3 ah kusoo gaadheen Vicarage Stadium ayaa markale cadayn buuxda u noqotay awooda Reds ee xilli ciyaareedkan.
5: Arsenal waa tartamayaal wax badan laga filan karo
Tababare Unai Emery ayaa u muuqda mid xasiliyay Gunners tan iyo markii uu yimid xagaagii, Doorka weerarka ee Emerick Aubameyang, Isla qabsashada Granit Xhaka iyo Lucas Torreira ayaa markale kasoo hilaacday kulankii Bournemouth oo ahaa midkii 17-aad ee xidhiidh ah ee aysan wax guuldaro ah qaabilin.